ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း တွင်ပါ၀င်သော ဆည်၊ တမံ၊ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ နယ်မြေကွင်းဆင်း လေ့လာဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ - မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း တွင်ပါ၀င်သော ဆည်၊ တမံ၊ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ နယ်မြေကွင်းဆင်း လေ့လာဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကြမ်း
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၀) ပထမနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်
ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်
← ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၏အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနများ၏ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာ၊သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်၊လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ နယ်မြေကွင်းဆင်းလေ့လာဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ ဒုတိယအကြိမ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာ၀န်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ →
ဝ၆၃-၂၀၂၈၆၄၀ ၀၆၃ ၂၀၂၈၇၅၈
Copyright 2018 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် . All Right Reserved.
Myanmar SEO & Web Design by MWD